Axaadiis dhaciif iyo Mawduuc isugu jira oo ku saabsan Bisha Ramadaan!!! | U adeeg Xadiith-ka Rasuulka
Axaadiis dhaciif iyo Mawduuc isugu jira oo ku saabsan Bisha Ramadaan!!!
Waxaa jira axaadiis badan oo isugu jira dhaciif iyo Mawduuc oo loo nasbeeyo Nabiga (sallalaahu caleyhi wasallam) . Axaadiistaas oo ku saabsan Bisha Ramadaan.
InshaAllaah Waxaan kasoo gelin kuwa ugu sii caansan!
(Ilaahow noo barakee Rajab iyo Shacbaan oo Ramadaana na gaadhsii)
Xadiisku Waxuu leeyahay laba ciladood oo ku saabsan isnaadka. 1) Zaaidata ibnu abii Rqaad << Waxay culimadu dhahaan waa Munkarul Xadiith . Waxaad ka eegtaan Miizaanul Ictidaal ee Imaamu Dhahbi ,marka uu turjumayo Zaaida.
2) Ziyaaad ibnu Cabdullahi Anamiiriy<< Waxuu wax ka weriyaa Anas Binu Maalik waase dhaciif, siday culimadu xadiithku sheegaan. Isna ka eeg Miizaanul Ictidaal ee imaam Dhahbi.
Sidaa daraadeed xadiiskani waa dhaciif.
Xadiiska 2aad شهر رمضان أوله رحمه و أوسطه مغفرة و آخره عتق من النار
(Bisha Ramadaan bilowgeedu waa Naxariis, badhtankeeduna waa Denbidhaaf, inteeda danbena waa naar iska xoreyn).
xadiiskani waa Munkar .
Isnaadka xadiiska waxaa ku jirta cilad. Ciladaas oo ah raawi la yidhaahdo Cali Ibnu Zeyd ibnu Jadcaan ayaa ku jira. Waxaana daciifiyay culimada qaar siduu imaam Albaani sheegayo. Culimadaasna waxaa kamid ah : Imaam Axmed , Ibnu Khuzeyma iwm. InshaAllaah xadiiska waxaad ka eegtaan Kitaabka imaam Albaani ee ah Silsilah axaadiith dhaciifiya wal Mawduuca .
اللهم لك صمت وعـلى رزقـك أفـطـرت
( Ilaahayow adaan kuu soomay, Rizqigaaga ayaana ku afuray).
Xadiiskan waa dhaciif , Waxaana daciifiyay culimo badan siduu imaam Albaani ku sheegayo kitaabkiisa “Irwaa’ul Qhaliil”.
Labo waddo ayuu ku yimid xadiisku. Mid waxaa laga werinayaa Anas ibnu Maalik midna Cabdullahi ibnu Cabbaas.
Xadiiska Anas waxaa ku jira cilad ah: Waxaa xadiiska la gees maray Ismaaciil ibnu Camru oo ah nin dhaciif ah
Xadiiska ibnu Cabaasna , waxaa ku jira Cabdi Malik ibnu Haaruun oo ah nin dhaciif ah iyo Cantara oo ah mid la isku khilaafo ,qaarna ay dhahaan waa munkar ,qaar kalena dhahaan lama xujaysto . Xadiiska 4aad
(Qofka sooman markuu afurayo waxuu leeyahay duco aan la celin).
Xadiiskani waa dhaciif sida ku qoran kitaabka Albaani ee la yidhaah Irwaa’ul qhaliil. Sababta uu dhaciifka u noqdayna waxaa isnaadka ku jira nin la yidhaah Isxaaq ibnu Cubeydillah
إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا ( Adoomadayda kuwaan ugu jeclahay waa kuwa dedejiya afurka)
Xadiiskan waa daciif sida uu ku sheegay Imaam Albaani kitaabkiisa Tadhciifu Tarqiib wa Tarhiib. Sababtuu u noqday daciifna waxaa weeye isnaadka waxaa ku jira Qurrata ibnu Cabdiraxmaan oo markuu Zuhuri ka werinayo yahay mid Dhaciif ah.
( Hadday adoomadu ogaan lahaayeen waxa ku jira bisha Ramadaan, waxay umadaydu jeclaan lahayd in sanadka dhanba uu ahaado Ramadaan).
Xadiiskan waa Dhaciif siduu sheegayo Ibnu Xajar al haythami kitaabkiisa Majmacu Zawaa’id. Waxaa ku jira isnaadka nin la yidhaah Jariir Ibnu Ayuub o ah nin dhaciif ah.
أي الصوم أفضل بعد رمضان فقال شعبان لتعظيم رمضان قيل فأي الصدقة أفضل قال صدقة في رمضان
( Waxaa la weriyaa in Nabiga scw la weydiiyay “Soon la soomo kee ugu fadhli badan Ramadaanka ka dib?. Markaasuu ku jawaabay Shacbaan , kadibna waxaa la weydiiyay sadaqo la bixiyo tee ugu fadhli badan, markaasuu ku jawaabay Tan la bixiyo Ramadaanka”.
Xadiskan waa Dhaciif siduu Imaam Tirmidi ku sheego sunankiisa. Waxuuna yidhi waxaa isnaadka ku jira Sadaqata Ibnu muusaa oo aan ahayn mid quwad leh (yacni la xujaysan karo).
( Bisha Ramadaan waxay kasoo laalaada/ ku xidhantahay cirka iyo dhulka dhexdooda. Waxaana Ilaahay xagiisa kor ugu sii qaadi kara iyadoo la bixiyo zakaatul Fidhr)
Xadiiskan waa Dhaciif sida uu sheegayo Imaam Ibnu Jawzi Kitaabkiisa “Al Cilalul Mutanaahiya”. Sababta uu dhaciifka u noqdayna waxaa weeye waxaa isnaadka ku jira Muxamed ibnu Cubeyd al Basri oo ah Majhuul.
Imaam albaani sida uu ku sheegayo kitaabkiisa Silsilatu axadiithu dhaciifa wal mawduuca waxuu yidhi ” xataa hadaan nidhaahno xadiiskan waa saxiix, waxuuba noqon mid na odhanaya ,hadaydaan bixin zakaatul fidriga la idinkama aqbalayo Ramadaanka, weligayna kamaan maqal caalim odhanaya sidaas”
(Rajab waa bishii Ilaahay, Shacbaana waa bisheydii, Ramadaana waa bishii Umadayda)
Xadiiskan waa mursal sidaa daraadeed waa dhaciif. Sidoo kale waxaa ku jira isnaadka Qaraan ibnu Tamaam oo ah Suduuq laakiin marmar khaldama.
ولله عزوجل في كل ليلة ألف ألف عتيق من النار
( Ilaahay Cazza wajal habeen welba (Ramadaanka) waxuu naarta ka xoreeya alf alf qof).
xadiiskan waa Mawduuc siduu Imaam Albaani ku sheegay kitaabkiisa silsilatu axaadiithu dhaacifata wal mawduuc. Waxaa isnaadka ku jira Cuthmaan ibnu Cabdullahi a Shaami oo ah mid been lagu tuhmo sida uu Ibnu Jawzi iyo Suyuudiba sheegeen. Wallaahu tacaalaa aclaa wa axkam
from → Axadiis Dhaciif ah oo ku saabsan Ramadaanka!, Duruus Yaryar Cilmul Xadiith
← Ibnu Maajah
Imaam Nisaa’i →